अविरल वर्षाका कारण धान खेती नष्ट, खाद्य सङ्कट आउने पूर्वानुमान – इन्सेक
बाँके ०७८ कात्तिक ३ गते
लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा असोज ३१ गतेदेखि परेको अविरल वर्षातका कारण कृषकहरूको काट्न तयार भएको धान खेती नष्ट भएको छ । बाली काटेर खेतमा राखेको र काट्न बाँकी रहेको बाली नष्ट हुँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन् भने खाद्य सङ्कट आउने पूर्वानुमान गरिएको छ । तराईका बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा धान खेतीमा क्षति पुगेको छ भने पहाडी जिल्लामा यसको असर परेको छैन ।
दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनका अनुसार लगातारको वर्षाले काटेर खेतमै सुकाएको धान पानीले भिजाएर नष्ट गर्नुको साथै ३० प्रतिशत धान बाली पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जिल्लाका दश स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेको तथ्यांकको आधारमा असोज ३१ गतेबाट परेको पानीले जिल्लाको ३ हजार ४ सय हेक्टर जग्गामा खेती गरिएको धान डुबाएको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब ३० प्रतिशत धान पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । बाँकी विवरण आउन बाँकी रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । दाङ३९ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो ।
कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यका अनुसार असोज ३१ गतेदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण कपिलवस्तु जिल्लामा पाक्नै लागेको र केही काटेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कृषि योग्य जमिन ८३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भए पनि जिल्लामा ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । जिल्ला भरिमा ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । काटेको धान पानीमा डुबेको छ , नकाटेको धान पनि धेरै जसो ढलेर डुबानमा छ । अहिले सम्म ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको धान पानीमा डुबेर क्षती भएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरि कृषि बिकास निर्देशनालय बुटवल पठाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका प्रमुख डाक्टर रबिन्द्रनाथ चौबेले जानकारी दिनु भयो । अझै पनि वर्षा नरोकिएको हुँदा किसानहरूको उत्पादनमा नोक्सान हुने देखिएको छ । धान कुहिने, चामल काटिने सम्भावना र गुणस्तरीय बिँउसमेत नपाउने अवस्था आउन सक्ने डा. चौबेले बताउनु भयो । चौबेले बताउनु भयो । डा. चौबेका अनुसार केही मात्रामा खाद्यमा सङ्कट हुने अनुमान गरिएको छ । खेती डुवान भएका पीडीत किसानहरूको विबरण सङकलनका लागि सम्बन्ति निकायसँग छलफल भइरहेको छ । बाणगंगा नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख लेषबहादुर केसीले वर्षातले खेती भित्र हाल्ने बेलामा ठुलो नोक्सानी गरेको बताउनु भयो ।
अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि कूलबहादुर नेपालीका अनुसार असोज ३१ गतेदेखि लगातार ४ दिनसम्म परेको वर्षाका कारण आएको बाढीले चुत्राबेंसी बजार हुदै बग्ने बाँगीखोला आसपासका खेतमा भएको धान बाली र तरकारी खेतीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । सन्धिखर्क नपा– १ कुडुलेका युवा कृषक सुर्य पन्थीका अनुसार मानवीय अतिक्रमणका कारण किसानहरूले यो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा १ सय ५० डेड रोपनी भन्दा बढी खेतको हजार मुरी भन्दा बढी धान बालीको क्षति भएको छ । वर्षा र बाढीको ठूलो असरले खाद्यान्नमा सङ्कट पर्न आउने कुरा कृषि विज्ञ मिलन नेपाली जोसेफले बताउनु भयो । सन्धिखर्क नगरपालिकाका उप मेयर ठाकुर बिकका अनुसार बेमौसमी जलवायु परिबर्तन र खोला किनार जग्गा अतिक्रमणका कारण बाढीले क्षति गरेको छ ।